I-loft ekhethekile enkabeni yedolobha - I-Airbnb
I-loft ekhethekile enkabeni yedolobha
Kaunas, Kauno apskritis, i-Lithuania
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Vygintas
Indawo enhle esakhiweni esiyiqiniso nesiyingqayizivele enkabeni yedolobha!
Imizuzu embalwa ukusuka kumgwaqo omkhulu wabahamba ngezinyawo wase-Kaunas obizwa ngokuthi "Laisvės alėja" kanye neBandla Lengelosi Eyinhloko i-St. Michael.
Ifakwe ngokuphelele i-loft eyodwa yokulala enegumbi lokugezela elihlukile.
Indawo yokupaka yangasese yamahhala iyatholakala emagcekeni.
Ilungele izithandani, izihambi ezizimele kanye nabahambi bebhizinisi.
Ifulethi elisanda kufakwa izinto futhi elihlotshiswe kahle esakhiweni esivuselelwe somlando.
Ifulethi linendawo yokulala enemibhede ephindwe kabili phezulu kanye nosofa ongashintshwa ube umbhede wokulala abantu abangu-2 esitezi sokuqala. Amathawula amasha nezingubo zokulala kunikezwa isivakashi ngasinye.
Igumbi lokugezela elihlukile elineshawa, umshini wokuwasha kanye nesomisi sezinwele.
Ikhishi lixhunywe negumbi lokuhlala futhi lihlome ngokuphelele i-hob, ihhavini, ifriji, i-teapot nomshini wekhofi. Futhi zonke izinto zokusika, izitsha zokupheka nezingilazi ziyatholakala ukuze uhlale unethezekile.
Ukuze kube lula kuwe ezinye izinsiza ezifana ne-inthanethi engenantambo yesivinini esiphezulu, i-smart TV, isomisi sezinwele, insimbi, isambulela nazo zihlinzekwa.
Isitobhi sebhasi sikude nje ngemizuzu engu-1 ukusuka efulethini.
4.94 · 131 okushiwo abanye
Le ndawo iseduze nomgwaqo omkhulu waseKaunas kanye nemigwaqo emide yabantu abahamba ngezinyawo eYurophu. Kunezindawo ezinhle ongazibona futhi uzivakashele phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo.
Futhi unezinketho eziningi zokudlela, imigoqo, izitolo zekhofi.
Sikulungele ukukunikeza lonke ulwazi olubalulekile ngokuhlala kwakho futhi sikweluleka ngokuthi yini okufanele uyibone kanye nezindawo ezinhle zokudla. Ukuze kube lula kuwe ngingatholakala ngocingo, umbhalo, i-Viber, i-imeyili, i-Airbnb messenger ngaso sonke isikhathi.
Sikulungele ukukunikeza lonke ulwazi olubalulekile ngokuhlala kwakho futhi sikweluleka ngokuthi yini okufanele uyibone kanye nezindawo ezinhle zokudla. Ukuze kube lula kuwe ngingat…
Hlola ezinye izinketho ezise- Kaunas namaphethelo